China S216 Top & Ala Labeler rụpụta na Factory | S-izu ike
Top & Bottom High Speed ​​Labeling Machine bụ ọmarịcha aha njirimara akpaka na akpaka igbe
S216 Top & N'ala High Speed ​​Labeling Machine
S216 bu ihe edeturu nke akpachapuru anya nke di na mpụga igbe di elu na ala di iche iche nke ubochi kwa ubochi, elektrọnik, ogwu, ihe oriri na ihe ndi ozo.
Wide nso mgbanwe ukpo Labeling Machine uwe maka dị iche iche nke ihe. Pụrụ iche pneumatic ejide labelụ usoro, welie elu & ala nkuku labeling nkenke.
a na-ejikwa akara mkparịta ụka dị elu (HMI) na-achịkwa akara ngosi ahụ iji hụ na nnyefe data ahụ kwụsiri ike na nke ziri ezi. Ọ na-enye ohere ka ihe ngosi eserese na-aga n'ihu ma kwụsie ike, nke ga-eme ka igwe ahụ rụọ ọrụ na-aga n'ihu.
* ezi uche ma na-agbanwe agbanwe na-adaba adaba maka ịkọ ngwaahịa dị iche iche.
* Nwere ike ịdebanye aha ụgbọ elu maka ihe dị iche, mepee ngwa ngwa.
* Site na ịtinye ndị na-edebanye aha ndị ọzọ, ị nwere ike ịghọta mkpịsị ederede abụọ na ịmegharị akara aha, Anyị nwere ike ịgbakwunye akụkụ dị iche iche maka nchọpụta na ịjụ ọrụ ntanetị dịka ịchọrọ.
* Dynamic clamping belt. Na-eme ka ịdebanye aha aha ya n'ụzọ ziri ezi karị.
* Usoro nyocha nke Siemens micro process njikwa PLC na-achịkwa, na-eme ka arụmọrụ ngwa ngwa ma kwụsie ike.
* A na-ebufe akara ngosipụta ọrụ site na servo motor ụlọ ọrụ mmepụta ihe (Yaskawa / Schneider / Honeywell) iji hụ na ịdebanye aha ziri ezi, arụmọrụ, na ọsọ mgbe ị dị ala na oriri ike. (N'ihi na elu na-agba chọrọ, na servo moto nwere ike họrọ)
* Na-eji ihe ntanetị anya dị elu na njedebe infrared (Keyence / Leon / Dalsa / Sick / Leuze) maka nchọpụta ziri ezi na mgbaàmà na-ebute na-enweghị nnyonye anya.
* Usoro ntanetị zuru ezu na-enye ike nkwụsi ike na izi ezi.
* Na-emetụta ụdị igbe ma ọ bụ karama niile na dayameta 30-150mm.
* Nnukwu ihe eji eme ihe site na German, France, Japan, USA.
* Mmetụta dị nro na usoro sayensị.
* S-conning pụrụ iche patent imewe, pụtara ìhè na mbukota ulo oru.
* 12 afọ ahụmahụ, ọkachamara maka debugging.
* Omimi mgbe ire ere.
* A na-ejikọta ọsọ ọsọ aha na akpaghị aka iji hụ na ịdebanye aha njirimara.
* 50 Job Memory maka ncheta dị mfe.
* Nkenke servo moto mbanye na labelụ isi.
* Gbaa mbọ hụ na GMP chọrọ gburugburu ebe obibi.
* Ọkachamara HMI mmetụ ihuenyo: mmetụ ihuenyo mmetụ ndị ọzọ.
Ejiri S216 Top & Bottom Automatic Labeler nwere ikike mgbanwe dị mfe maka ọrụ mmepụta dị iche iche, dị ka akara aha ọnọdụ na oke chọrọ maka mmepụta. Nke a na - ekwe nkwa mmepụta ihe gị ga - adịgide adịgide yana akara ngosi kachasị mma.
Akụkụ (L) 2180 x (W) 810x (H) 1600mm
Akpa akpa W50-340mm; H 10-280mm
Nke gara aga: Katọn / Igbe Top na Bottom Mkpa Labeling Machine
Osote: Ugboro abụọ Side Ewepụghị Square Now Bot Labeling Machine
S823 Ugboro abụọ n'akụkụ labeler
Commercial Bottle Labeling Machine, Label Printer N'ihi Ngosiputa ite karama, Sirinji Syringe na nyocha usoro, Label Applicator Machine N'ihi igbe, Plastic akara igwe, Top na ala Labeler,